Ndị na-emepụta na ndị na-arịa ọrịa na-efe efe - Factlọ Ọrụ Na-efe Ọrịa Na-efe Ọrịa China
Nchoputa nke nje nje
Bu n'obi iji StrongStep® Bacterial vaginosis (BV) Ngwa ule ule na-ezube iji tụọ anụ ahụ pH maka enyemaka na nchoputa nke Bacterial vaginosis. Okwu mmeghe Ihe uru pH nke acid bu nke 3.8 rue 4.5 bu ihe a choro maka oru oma nke aru nke onwe ya nke ichebe ikpu. Usoro ihe a nwere ike izere ịchịkwa nke ọma site na nje na ọrịa nke ọrịa na-efe efe. Ihe kachasị mkpa na nke kachasị dị nchebe na probl ...
NKWAKWUO A na-eche na candidiasis Vulvovaginal (WC) bụ otu n'ime ihe ndị kachasị akpata mgbaàmà mmamiri. Ihe dị ka, 75% nke ụmụ nwanyị ga-achọpụta Candida opekata mpe otu oge n'oge ndụ ha. 40-50% n'ime ha ga-ata ahụhụ ugboro ugboro na 5% na-eme atụmatụ ịzụlite adịghị ala ala Candidiasis. A na-achọpụtakarị ọrịa Candidiasis karịa ọrịa ndị ọzọ na-efe efe. Mgbaàmà nke WC nke gụnyere: oke itching, mmamiri mgbu, iwe, ọkụ ọkụ na egbugbere ọnụ nke mpụga ...
OKWU NKWA: Gonorrhea bu oria site na mmeko site na nje Neisseria gonorrhoeae. Gonorrhea bụ otu n'ime ọrịa nje na-efe efe na-ebutekarị n'oge mmekọahụ, gụnyere mmekọahụ, ọnụ na mmekọahụ. Nje na-akpata ahụ nwere ike ibunye akpịrị, na -emepụta akpịrị dị ukwuu. Ọ nwere ike ibunye ọrịa ike na ikensi afọ, na -emepụta ọnọdụ a na-akpọ proctitis. Na ụmụ nwanyị, ọ nwere ike ibunye ikpu, na-akpata iwe na drainage (...
StrongStep® Chlamydia trachomatis ngwangwa bụ ngwangwa ngwa-ọgụ immunoassay maka nchọpụta iru ike ruru oke nke antigen nke Chlamydia trachomatis antigen na nwoke urethral na nwanyi cerab swab. Uru Ọ dị mma na ngwa ngwa oge 15 chọrọ, igbochi ụjọ na-eche nsonaazụ. Oge ọgwụgwọ Oge uru dị elu maka nsonaazụ dị mma na nkọwapụta dị elu na-ebelata ihe ize ndụ nke ịmalite na nnyefe ọzọ. Ọ dị mfe iji usoro otu, enweghị ọkachamara ma ọ bụ nkuzi ...
Ebumnuche ejiri StrongStep® Cryptococcal Antigen Rapid Test Ngwa nyocha ngwa ngwa na-adịghị egbochi chromatographic maka nchọpụta nke antigens polypsaccharide capsular nke ụdị ihe dị iche iche nke Cryptococcus (Cryptococcus neoformans na Cryptococcus gattii) na ọbara, plasma, ọbara dum na ụbụrụ ụbụrụ ụbụrụ (CSF). Nnwale a bụ ọgwụ iji ọgwụ nyocha eme ihe nwere ike inye aka na nyocha nke cryptococcosis. Okwu Mmalite Cryptococcosis sitere na umu abuo nke Cryptococcus umu com ...
HSV 12 Antigen Ule
Okwu HSV bu envelop, nje na-enweta DNA nke yiri ihe ndị ọzọ so na genus Herpesviridae. , anụ ahụ, anya na genitalia, A na-ahụkwa ọrịa nke usoro nhụjuanya nke etiti (meningoencephalitis) na nnukwu ọrịa zuru oke nke nwa ọhụrụ nke ọrịa immunocompromised, n'agbanyeghị ...
Ihe nyocha nke ngwa ngwa nke StrongStep® Neisseria gonorrhoeae Antigen bụ ngwa ngwa na-aga n'ihu na-aga n'ihu maka nchọpụta ike nke Neisseria gonorrhoeae antigen na nwoke urethral na nwanyị cerab swab. Uru Uru Ezi uche (97.5%) na oke nkọwa (97.4%) dịka nsonaazụ nke 1086 ikpe nke ọnwụnwa ahụike. Otutu Naanị oge 15 chọrọ. Usoro ọrụ iji chọpụta antigen ozugbo. Ngwaọrụ na - enweghị ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ụlọ ọgwụ ...
Ebumnuche nke StrongStep® HPV 16/18 Antigen Rapid Test Ngwaọrụ bụ ngwa ngwa ọhụụ iji gbochie nchọpụta ikike iru eru nke HPV 16/18 E6 & E7 oncoproteins na ụdị ụbụrụ swab nke nwanyị. Ekwesiri iji kit a mee ihe dị ka ihe enyemaka na nchoputa nke Cervical Pre-cancer na Cancer. Okwu Mmalite Na mba ndị ka na-emepe emepe, ọrịa cancer cervical bụ isi ihe kpatara ọrịa kansa metụtara ụmụ nwanyị, n'ihi enweghị mmejuputa nyocha nyocha maka ọrịa kansa tupu ọrịa cancer na ca ...
Ebumnuche siri ike nke StrongStep® Strep Ngwa Ngwa Ngwa bụ ngwa ngwa immunoassay maka nchọpụta qualitative nke Group A Streptococcal (Group A Strep) antigen si na akpịrị swab ụdị dị ka enyemaka maka nchoputa nke Group A Strep pharyngitis ma ọ bụ maka nkwenye omenala. Okwu mmalite Beta-haemolytic Group B Streptococcus bụ isi ihe na-ebute ọrịa iku ume n’elu ụmụ mmadụ. Otu ọrịa Streptococcal na-apụtakarị bụ pharyngitis. Ihe mgbaàmà nke a, ọ bụrụ na ahapụghị ya ...
StrongStep® Strep B antigen Rapid Test bụ ngwa ngwa na-egbochi immunoassay maka nchọpụta ike nkwenye nke Group B Streptococcal antigen na nwanyị ikpu swab. Abamuru nke dị ngwa Ngwa erughị nkeji iri abụọ maka nsonaazụ ahụ. Na-enweghi mmekpa ahu Ma ikpu na nke cervical dị mma. Mgbanwe Enweghị ngwa pụrụ iche achọrọ. Nchekwa Roomlọ Nkọwapụta Ọnọdụ Nkọwapụta 87.3% Specificity 99.4% Ezigbo 97.5% CE akara Kit Size = 20 ngwa iwu File: Akwụkwọ ntuziaka / MSDS ...
Ebumnuche siri ike StrongStep® Trichomonas Vaginalis Antigen Rapid Test ezubere maka nchọpụta qualitative nke Trichomonas vaginalis (* Trichomonasw) antigens sitere na swabs. Ebumnuche a ka eji mee ihe dị ka ihe enyemaka na nchoputa nke ọrịa Trichomonas. Okwu Mmalite Ọrịa Trichomonas bụ ihe kpatara ọrịa kachasị ebute site na mmekọahụ (vaginitis ma ọ bụ trichomoniasis) zuru ụwa ọnụ. Trichomoniasis bu ezigbo ihe kpatara oria ojoo n'etiti ndi oria niile oria a ...
Trichomonas ikpuru & Candida
StrongStep® StrongStep® Trichomonas / Candida ngwangwa ule Combo bụ ngwa ngwa n'akụkụ-aga immunoassay maka qualitative presumptive nchọpụta nke trichomonas vaginalis / candida albicans antigens si mmamiri swab. Uru ngwa ngwa Naanị 10 nkeji chọrọ. Chekwaa oge na ọnụ Otu ule maka ọrịa abụọ nwere otu swab. Nchoputa oge nile Di iche na oria abuo nke oma. Ndị ọrụ nlekọta ahụike niile na-eme ma sụgharịa ya nke ọma. Ime ụlọ nchekwa nchekwa Specif ...
Igm / Iggrapid Ule Nnwale, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Nnwale Nnwale, H. Pylori Ag Ngwa Ule Na-achọpụta Antigen, Coronavirus Antigen Nnwale Ngwa, Coronavirus Maka Covid-19 Ule, Akwụkwọ akụkọ Coronavirus Rapid Test Ket,